Hawaasni Oromoo Nezerlaand qabsoo Oromoo hanga bilisummaatti dinagdeen utubuudhaaf waadaa seene | Oromo Nederland
Onkoloolessa 15, 2016 Hawaasni Oromoo Nezerlaand qabsoo bilisummaa Oromoon Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti marii badhaa taasise. Mariin kuni kan taasifame magaalaa Amsterdam itti.
Oromoonni marii kanarratti argaman kanniin qabsoo irratti wareegaman yaadatani; akkasumas ajjeechaa fi gidiraa mootummaa Woyyaaneetiin lammii isaanii irratti raawwatamaa jiru balaaleffataniiru. ‘Labsii yeroo muddamaa’ jechuudhaan sochii bal’aa ukkaamsaa fi saamichaa Woyyaaneedhaan Oromoo irratti geggeeffamaa jirus kan hedduu isaan yaachise ta’uu dubbataniiru.
Qabsoon Oromoo sadarkaa ol’aanaa irra gayuun hubannoo hirmattota hundaati. Erga dhiigaan sadarkaa kanarra gayamee qabsicha gatii kamiinuu xumuraan gayuun alatti Oromoon fala biraa kan hin qabne ta’uu hundi jala sararaniiru.
Qabsoon Oromoon geggeesaa jiru qabsoo haqaa fi guutummatti kan deeggaraniidha, akka yaada hirmaattotaatti. Hanga bilisummaatti diinagdeen, beekumsaa fi karaa danda’amu hundaan qabsoo Oromoo deeggaruudhaaf murannoo isaanii ifa godhaniiru. Battalumattis qabsoo bilisummaaf kan oolu maallaqa wolitti qabaniiru. Ammas, hanga xumura gabrummaatti baatii baatiidhaan guumaacha diinagdee wolirraa hin cinne godhuudhaaf waadaa seenaniiru.
Hirmaattonni marii kanaa Oromoon bakka jiru hundaa diinagdee fi beekumsaa qabuun qabsoo bilisummaa akka deeggaran waamicha Oromummaa dhiyeessaniiru.
Qabsoon kallattii hundaan itti fufa!
#oromoprotestshawaasa oromoo nezerlaandmarii hawaasaaqabsoo bilisummaa